Ezra 5 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
5 Ary i Hagay+ mpaminany sy Zakaria+ mpaminany zafikelin’i Ido,+ dia naminany teo amin’ireo Jiosy tany Joda sy Jerosalema, tamin’ny anaran’ilay+ Andriamanitry ny Israely izay nomba azy ireo.+ 2 Tamin’izay i Zerobabela+ zanak’i Sealtiela,+ sy Jesoa+ zanak’i Jozadaka, no nanomboka nanorina indray ilay tranon’Andriamanitra tany Jerosalema. Ary nisy mpaminanin’Andriamanitra+ nanampy azy ireo. 3 Tamin’izany fotoana izany no tonga teo amin’izy ireo i Tatenay+ governora tatỳ ampitan’ny Renirano,+ sy Setara-bozenay mbamin’ny naman’izy ireo, ka nilaza hoe: “Iza no nanome baiko anareo hanorina an’io trano io sy hanao an’io rafitra hazo io?”+ 4 Ary hoy koa izy ireo: “Iza avy no anaran’ireo vatan-dehilahy manorina an’io trano io?” 5 Ary nitsinjo+ an’ireo anti-panahin’ny Jiosy ny mason’ny+ Andriamaniny, ka tsy vitan’ireny ny nampitsahatra ny asan’izy ireo, mandra-pandefa tatitra tany amin’i Dariosy sy mandra-pahazo valin-taratasy momba izany. 6 Intỳ ny dika mitovy+ amin’ilay taratasy ho an’i Dariosy Mpanjaka, izay nalefan’i Tatenay+ governora tatỳ ampitan’ny Renirano,+ sy Setara-bozenay+ ary ireo namany+ izay governora lefitra tatỳ ampitan’ny Renirano. 7 Nandefasan’izy ireo taratasy izy, ka izao no voasoratra tao: “Ho an’i Dariosy Mpanjaka: “Fiadanana anie ho anao!+ 8 Aoka ho fantatry ny mpanjaka fa nankany amin’ny faritanin’i+ Joda izahay, tany amin’ny tranon’ilay Andriamanitra lehibe.+ Misy manorina izy io, ka vato lehibe nakodiadia no anaovana azy, ary efa napetraka ireo hazo ao anaty rindrina. Mazoto manao ilay asa izy ireo, ka mandroso haingana izany. 9 Dia nanontanianay ireo anti-panahy ireo hoe: ‘Iza no nanome baiko anareo hanorina an’io trano io sy hanao an’io rafitra hazo io?’+ 10 Nanontanianay koa ny anaran’izy ireo mba hahafahanay hanoratra ny anaran’ireo vatan-dehilahy mpitarika azy ireo, ka hampahafantarinay anao.+ 11 “Ary izao no navalin’izy ireo anay: ‘Mpanompon’ilay Andriamanitry ny lanitra sy ny tany izahay,+ ka manorina indray ilay trano efa natao taona maro lasa izay. Mpanjaka lehibe iray teo amin’ny Israely no nanorina sy namita azy io.+ 12 Nampahatezitra+ an’Andriamanitry ny lanitra anefa ny razanay, ka natolony+ teo an-tanan’i Nebokadnezara+ Kaldeanina,+ mpanjakan’i Babylona. Dia noravan’i Nebokadnezara ity trano+ ity, ary nataony sesitany tany Babylona ny vahoaka.+ 13 Tamin’ny taona voalohany nanjakan’i Kyrosy+ mpanjakan’i Babylona anefa, dia nanome baiko mba hanorenana indray an’ity tranon’Andriamanitra ity i Kyrosy Mpanjaka.+ 14 Navoakany avy tao amin’ny tempolin’i Babylona koa ny fitaovana+ volamena sy volafotsin’ny tranon’Andriamanitra tao amin’ny tempolin’i Jerosalema. I Nebokadnezara mantsy no naka an’ireo tany Jerosalema sy nitondra izany nankao amin’ny tempolin’i Babylona.+ Dia nomen’i Kyrosy Mpanjaka+ an’i Sesbazara+ ireny. Izany no anaran’ilay nataony governora.+ 15 Ary hoy izy taminy: “Ento ireo fitaovana ireo+ ka mandehana apetraho ao amin’ilay tempoly any Jerosalema. Ary aoka ny tranon’Andriamanitra haorina indray eo amin’ilay toerany taloha.”+ 16 Rehefa tonga io Sesbazara io dia nandatsaka ny fototry ny tranon’Andriamanitra+ teto Jerosalema izy. Koa nanomboka tamin’izay ilay trano no naorina indray, nefa mbola tsy vita hatramin’izao.’+ 17 “Raha mety amin’ny mpanjaka àry, dia aoka hisy fikarohana+ hatao ao amin’ny trano fitehirizana ny zava-tsarobidin’ny mpanjaka ao Babylona, mba hahitana raha tena nisy baiko+ nomen’i Kyrosy Mpanjaka tokoa, hanorenana indray an’io tranon’Andriamanitra any Jerosalema io. Ary aoka halefan’ny mpanjaka atỳ aminay izay fanapahan-keviny momba izany.”